Dhimashada kaddib | Tixraaca Fudud Ee Muslimka
Bogga hore/Qeybaha/Mowdka iyo Janaazada/Dhimashada kaddib
Yaa meyraya meydka
Hadduu ku dardaarmo meydka inuu meyro hebel waa in la fuliyo dardaarankiisa.
Wiilasha iyo gabdhaha ka yar toddobo sano, waxaa bannaan inuu meyro midkood walbaa ragga ama haweenka, inkastoo ay wanaagsan tahay inay meyraan wiilka yar ragga, gabadha yarna haweenka.
Haddii meydka uu ka weyn yahay toddobo sano ma meyrayaan ragga waxaan ahayn rag, haweenkana waxaan ahayn haween.
Waxaa u bannaan ninka inuu meyro afadiisa, xaaskana waxaa u bannaan inay meyrto ninkeeda, waxaana la ogsoon yahay inuu Cali bin Abii Daalib  meyray Faadimah 
Caa’isha  waxay tiri: “Haddii aan horay u ogaan lahaa waxa aan hadda ogahay ma ay meyreyn Rasuulka Alle  waxaan ahayn haweenkiisa”. (Abuu Daawuud 3141, Ibnu Maajah 1464).
Kafnidda meydka waxay ka mid tahay xuquuqda waajibka uu ku leeyahay ehelkiisa iyo Muslimiinta.
Waxaana laga qaadaa qiimaha kafanta maalka uu ka tagay hadduu maal leeyahay, haddii uusan ka tegin maal, waxay saaran tahay qiimaha kafanta qofka ay ku waajibto nafaqadiisa inta uu noolaa, haddii aanay heli karin, waxay saaran tahay jamaacada Muslimiinta ee hodanka.
Waxaa kaafi ah xagga kafanta inta waajibka ah ee asturi kara oogada meydka ee dharka daahirka ah ha ahaado nin meydka ama haween,
Waxaase fiican oo ajar badan kuwan soo socda:
In lagu kafno ninka seddex maryood oo cad cad, sida loo kafnay Nabiga , waxaana fiican in lagu kafno haweenta shan maryood astur ahaan ziyaado ah darteed.
Waxaa fiican oo ajar badan in midabka kafanta yahay mid cad haddii la heli karo, Nabigu  wuxuu yiri: “Ka xirta dharkiinna kuwa cad cad, waayo waxay ka mid yihiin kuwa u wanaagsan dharkiinna, oo ku kafna mowtadiinna” (Abuu Daawuud 4061, At-Tirmidi 994, oo yiri waa saxiix, Ibnu Maajah 3566).
Waxaa fiican in lagu udgiyo kafanta noocyada udgoonka bannaan.
Waxaa la doonayaa in si aad ah loogu dadaalo kafnidda iyo ku duubidda maryaha meydka madaxiisa iyo cagahiisa, Nabigu  wuxuu yiri: “Marka uu kafnayo midkiin walaalki ha hagaajiyo kafnaddiisa” (Muslim 943)
Waa in lagu dadaalo kafanta iyo xiriddeeda